စိမ့်စမ်းရေ: PC တစ်လုံးကိုဖေါက်ထွင်းမယ်
ဖောက်ထွင်းမယ်ဆိုလို့ Hacker လို့အပြောမစောလိုက်ပါနဲ့ဗျာ....။
ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရလို့ ချွေးပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာ....။ ရုံးကစက်တစ်လုံးကို password မှားနေမှန်းမသိဘဲ အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ဝင်ရင်း log ဖြစ်သွားခဲ့တုန်းက ကျွန်တော် google ထဲမှာ ဖြဲရှာခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ရှုပ် အလုပ်များနေရင် ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒါလေးကို password ဖက်ထိပ် မိသူများ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် password မှားဝင်းမိ၍ log ကျသွားသည့် PCများအားဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ် တင်ပြတာပါခင်ဗျာ။
လောလောဆယ် Win-7 တွေအသုံးများတာဆိုတော့ ဒါလေးလဲအသုံးဝင်ပါသေးတယ်။ အဓိကကတော့ thumb wright (memory stick) ထဲကို boot loader ထည့်သွင်းနည်းလေးနဲ့ အခြေခံသုံးနည်းလေးကို သိထားစေချင်တာပါ။ နည်းလေးကိုသိထားရင် software ကရှာလို့လွယ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ထုတ်သုံးနိုင်အောင်ပါ။ သူများစက်တွေကို သွား hack ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အစိမ်းသက်သက်သမားများပါ အဆင်ပြေဖို့ တစ်နေရာထဲကနေအသေးစိပ်ပြောပေးသွားပါ့မယ်။ ဒီမှာဖြေးဖြေချင်းဖတ်သွားပြီးမှ စမ်းကြည့်ကြပါ။ လွယ်ပါတယ်..........
memory stick ထဲသို့ boot loader ထည့်သွင်းခြင်း
memory stick ကို format ချပါ။ ပြီးလျှင် command prompt ကိုဖွင့်ပါ ( Window Key + R Key ---> cmd --->Enter)။ command prompt ထဲမှာအောက်ပါ command များရိုက်ထည့်ပါ-
3. select disk × (× နေရာလေးမှာ မိမိထိုးထားတဲ့ stick driver ကိုအစားသွင်းပါ။E:/F:/G: စတဲ့ထဲကတစ်ခုခုပေါ့)
ဒါဆိုရင်........boot loader ရသွားပါပြီ။
Offline NT ထည့်သွင်းခြင်း
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/cd100627.zip မှ Offline NT password & Registry Editor ကို download ဆွဲပါ။(အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ်ဘာနဲ့သုံးမလဲ စက်အမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် software ကို ရွှေးယူပါ။) zip file တစ်ခုရမယ်။ Extract လုပ်ပါ။ ISO file ထွက်လာမယ်။ Extract လုပ်ပါ။(CD နဲ့သုံးချင်ရင်တော့ ISO file ကို burn လိုက်ရင်ပဲသုံးနိုင်ပါပြီ)
ISO file ကို extract ထပ်လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ဖိုင်တွေကို thumb wright ထဲထည့်ပါ။ပြီးရင် command prompt ကိုဖွင့်ပြီး အောက်ပါ command ပေးပါ-
×\_syslinux.ex -ma × ( × နေရာလေးမှာ စောစောကလိုပဲ Driver letter အစားသွင်းပါ။ E:/F:/G: ထဲကတစ်ခုခုပေါ့)
ဒါဆိုရင် thumb wright/ stick/ flash drive ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ stick လို့ပဲ ဗမာလိုပြောတော့မယ်။
အင်း stick ထဲကို Offline NT Password & Registry Editor ထည့်ပြီးသွားပါပြီ။
stick ကနေ boot တက်ပါ။(ပါဝါ on ပြီးတာနဲ့ F2 ကိုပဲခေါက်နေပေတော့။ ပြီးရင် setting ထဲမှာ ဘယ်ကတက်မယ်ဆိုထာပြောင်းပေးထားလိုက်ပါ)
Offline NT တက်လာပါမယ်။ Enter သာခေါက်လိုက် ပြီးရင် driver တွေဆွဲခေါ်တဲ့ letter တွေပေါ်လာမယ်။ အဲဒါရဲ့နောက်ဆုံးမှာ window partition ရွှေးဖို့ command တွေပါလာမယ်။ အဲဒီထဲမှာ များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ window ဟာ partition 1 မှာရှိလို့ 1 ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်တာပါပဲ။
(partition တွေခွဲထားရင်တော့ လုပ်ချင်တဲ့ partition number ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့။) အဲဒါပြီးရင်( reset/recovery/quit ) ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ command လေးလာမယ် reset လုပ်မှာဆိုတော့ reset command ပါတဲ့ 1ကိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် command တစ်ခုထပ်တက်လာမယ်...အဲဒီမှာလဲ user account တွေကို edit လုပ်မှာဆိုတော့ command ကို 1ပေးပြီး enter ခေါက်ပါ။
အဲဒီအခါ Win-7 ထဲရှိသမျှ user account တွေတက်လာမယ်။
အဲဒီထဲက ကိုယ်ဖျက်မယ့် account နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ ဥပမာ. administrator ပေါ့။
Menu တစ်ခုပေါ်လာမယ် အိုက်ထဲကနေ clear လုပ်မှာမို့ 1 ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ သိမ်းပြီးထွက်မှာမို့ Shift+1 နှိပ်ပါ။Menu ထပ်ပေါ်လာရင် ထွက်မှာမို့ q ရိုက်ပါ။
About to write Files(s) back!Do it?(y/n):
လို့ပေါ်လာရင် y (yes) ကိုရိုက်လိုက်ပါ ပြီးသွားပါပြီ။
တစ်ခုမှာချင်တာကတော့ ပထမဆုံးလုပ်တာဆိုရင် command နဲ့ menu လေးတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းဖတ်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်းသွားစေချင်ပါတယ်။ နှစ်ခါမလုပ်ရရင် စိတ်မရှုပ်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကဲ.........Hack လိုက်ကြစို့...........intelligence hack ပေါ့ဗျာ။
ref: ( http://crazybag.ning.com/profiles/blog/show?id=4800960%3ABlogPost%3A1502770&xgs=1&xg_source=msg_share_post)